प्रचण्ड कुहिएको आलु निस्किएः प्रम केपि ओली::Point Nepal
प्रचण्ड कुहिएको आलु निस्किएः प्रम केपि ओली
चितवन – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कु,हिएको आलु भएको टिप्पणी गरेका छन् । आफू पक्षीय नेकपाले भरतपुरमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘चितवनको सुन्दर भूमि माडीलाई मणि बनाउँछु भनेको थिएँ । तर जसका लागि भोट मागेँ ऊ नै कुहिएको आलु निस्किएपछि कसरी माडी मणि बनोस् त !’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ को निर्वाचनका क्रममा प्रचण्डलाई भोट माग्दै चितवनको पर्यटकीय केन्द्र माडी पुगेर त्यो ठाउँलाई मणि बनाउँने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसहित माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालमाथि पनि कटाक्ष गरे ।
‘तीनवटा प्रधानमन्त्री लौरो टेकेर देशभर लुखुरलुखुर हिँडेका छन् । लाइन लागेर हिँडेका छन् बुढेसकालमा’, उनले भने, ‘कुदिरहेका छन् देशभरी के गर्न दौडिएका हुन् कुन्नि ? ।’
त्यस्तै उनले आफूलाई सक्कली राष्ट्रवादी दाबी गर्ने ‘प्रचण्ड’ले राम अयोध्यापुरीमा जन्मिएका भनेर बोल्न डराएको टिप्पणी गरे । ‘यहीँबाट चुनिएका सांसद अयोध्यापुरीमा राम जन्मिएका भनेर चुइँक्क बोल्दैनन्, बोल्न कसको डर ? बडा सक्कली राष्ट्रवादी भएर हिँड्नुभएको छ ।
मयुरको प्वाँख लाउँदैमा अर्को चरो मयुर हुँदैन,’ उनले भने, ‘अयोध्यापुरीमा राख्न रामको भव्य प्रतिमूर्ति तयार भइरहेको छ, अर्को सालको रामनवमीमा प्राण प्रतिष्ठा गर्नेछौं । त्यसको अर्थ के हो ? अयोध्यापुरी विश्वका संस्कृतिविद्हरूको गन्तव्यस्थान हुनेछ । धेरै तीर्थालुको गन्तव्यस्थल हुनेछ ।’